Ma dhul badan oo dawladda iyo AMISOM ay haysteen ayaa gacanta u galaya Al Shabaab? - BBC News Somali
Ma dhul badan oo dawladda iyo AMISOM ay haysteen ayaa gacanta u galaya Al Shabaab?
Image caption Dagaallamayaal ka tirsan Al Shabaab
Iska hor imaad dhex maray Shabaab iyo ciidan si gaar ah u tababaran
Al-Shabaab oo dib u qabsatay Bariire
Image caption Meelaha kale ee ay Sl Shabaab la wareegeen waxaa ka mid ah Goof gaduud
Shacabka ayaa is weydiinaya sababta ay dowladda Soomaaliya ugu istaagi la'dahay cagaheeda ayna guul kama dambeys ah uga soo hoyn la'dahay howlaha ammaanka.
"Maamul goboleedyada ayaa ka gaabiyay taageeradii looga baahnaa iney dowladda siiyaan, ciidamada AMISOM sidoo kale daacad kama aha iney Dowladda Soomaaliya isku filnaato, Qaramada Midoobayna waxay Dowladda Soomaaliya ka hor taagan tahay iney ka qaaddo xayiraadda hubka si ay awood fiican ugu yeelato dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab" ayuu yiri Janaraal Guubir.
Image caption Jeneraal Guubir eedda wax ka saarayaa maamul goboleedyada
Masuuliyadda ugu weyn ee dhibaatadan ayuu dusha uga tuuray maamul goboleedyada oo uu ku tilmaamay "kuwo mar walba curyaamiya dowladda federaalka".
"labo qolo oo hub isku nooc ah heysata ma kala adkaan karaan, sidaas awgeed waa in dowladda laga qaado xayiraadda dhinaca hubka" ayuu yiri isagoo hadalkiisa sii watay.
Image caption Dhulalka casaanka ah ayaa la sheegayaa in aysan gacanta ugu jirin dawladda
Janaraal Guubir oo arrintaan aan wax ka weydiinnay ayaa sheegay in taageeridda shacabka ay ka imaan karaan faa'iido iyo khasaare labadaba.
"Haddii la hubeeyo oo la yiraahdo iska celiya, waxaa laga yaabaa iney hubka qaataan oo ay dhinac kale isku rogaan" ayuu yiri.